Download ndepụta okwu nke ihe nkiri gị na usoro na-akpaghị aka na ndepụta okwu [SWEEPSTAKES] | Esi m mac
Download ndepụta okwu nke ihe nkiri gị na usoro na-akpaghị aka na ndepụta okwu [SWEEPSTAK]
Luis Padilla | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac, ọtụtụ
Usoro ndị a dị na ejiji, ma hụ ha na nsụgharị mbụ ha bụ oge ụfọdụ ka ha nwee ike ịnụ ụtọ ha obere oge mgbe emechara ha na United States, ma ọ bụ nhọrọ maka ndị chọrọ ịnụ ụtọ olu ndị na-eme ihe nkiri na-enweghị okpukpu abụọ. Nke a pụtara maka ọtụtụ ọrụ ibudata ndepụta okwu, usoro nke nwere ike ịgwụ ike mana ekele na ndepụta okwu, ngwa etolite na Spain, ọ dị ngwa ma dịkwa mfe, ebe ọ na-emere gị ihe niile, na-ejikwa ihe kachasị mma na nke kachasị. ndepụta okwu dị adị ugbu a: OpenSubtitles.org. N'iji eziokwu ahụ bụ na a na-ere ngwa ahụ na 50% nke ọnụahịa mbụ ya, anyị nyochaa ya n'isiokwu a yana Ekele dịrị onye nrụpụta gị ị nwere ike imeri otu akwụkwọ ikikere 10 anyị na-akpọpu. Anyị na-enye gị ozi niile dị n'okpuru.
1 Naanị ịdọrọ
2 Anyị na-akpọpu ikikere iri
3 Ndị mmeri Raffle
Ọrụ nke ngwa ahụ enweghị ike ịdị mfe: ịdọrọ nkiri ma ọ bụ usoro faịlụ (s) onye ndepụta okwu ịchọrọ ibudata na ngwa ahụ ga-eme ndị ọzọ maka gị. Ọ bụghị naanị na ọ ga-ebudata ndepụta okwu ahụ mana ọ ga-degharịkwaa ha ka ha nwee otu aha ahụ vidiyo vidiyo ma si otú ọ bụla ọkpụkpọ dakọtara ga-amata ya. Nwere ike ịdọrọ folda niile juputara na faịlụ nke ga - ebudata ndepụta okwu niile.
Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịtọ asụsụ asụsụ ederede ịchọrọ ibudata, nwee ike ịhazi ọtụtụ asụsụ n'otu oge. Pụrụ ọbụna hazi a ndekọ nke mere na ngwa nwere ya nọgidere ekwu na ihe ọ bụla faịlụ na ị tinye nwere ya kwekọrọ ekwekọ sobtaitel faịlụ.
Na ndepụta okwu i nwere ike ichefu banyere ibudata faịlụ otu otu na ịnwe nyegharịa ha ka ha dakọtara aha nke vidiyo vidiyo mbụ. Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ, ngwa a na-ahụ maka usoro ahụ niile na sekọnd ole na ole.
Enwere ike ibudata na ndepụta okwu gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ma nwalee ya ụbọchị ole na ole na ọrụ ya niile zuru ezu iji jide n'aka na ọ bụ ihe ị na-achọ. Ozugbo oge ikpe ahụ gafere, a na-akwụ ụgwọ ya na $ 19,90, ọ bụ ezie na ọ na-ere ugbu a na $ 9,95 ọ nwere ike ịbụ nke gị. I nwekwara ike imeri otu n'ime ikikere iri anyị na-agbakọ site na isoro ntuziaka ndị akọwapụtara n'okpuru.
Anyị na-akpọpu ikikere iri
Inweta otu n'ime akwụkwọ ikikere Emechibidoro akwụkwọ dị mfe. Naanị ị ga-agbaso SoydeMac na Twitter nke ị nwere ike pịa bọtịnụ dị n'okpuru usoro ndị a.
Ozugbo ị soro anyị, ị ga-emerịrị biputere tweet nke ị kpọtụrụ @SoydeMac ma jikwa hashtag # SorteoSubttitles, na-ekerịta njikọ nke isiokwu a. Ọ bụrụ na ị jiri bọtịnụ dị n'okpuru ya ga-adị mfe karị.
Ozugbo tweet bipụtara, anyị na-arịọ gị ka ị dee okwu na edemede a na-egosi onye ọrụ Twitter na usoro kacha amasị gị ma ọ bụ ihe nkiri nke afọ a 2015. Ọ ga-adị mkpa iji dee tweet n'ụzọ ziri ezi na nkọwa dị n'isiokwu ahụ iji sonye na raffle.
Ihe osise a malitere site ugbu a gaa n'ihu, ọ ga-emeghe ruo Wenezdee 23 ruo mgbe elekere 23:59.. N'ime ndị niile so na ya, anyị ga-agbanye akwụkwọ ikike iri ahụ ma anyị ga-ebipụta ndị mmeri ebe a ozugbo oge nsonye ahụ mechara.
Ndị mmeri Raffle
kwa ụbọchị porculero
Biko kpọtụrụ m na Twitter (@LuisPadillaBlog) iji zitere gị koodu gị. Ekele dịrị ndị mmeri ma kelee gị nke ukwuu onye ọ bụla maka isonye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Download ndepụta okwu nke ihe nkiri gị na usoro na-akpaghị aka na ndepụta okwu [SWEEPSTAK]
Ndewo, anọ m na-eso gị ogologo oge na m ga-achọ isonye na raffle a, usoro m n'oge a na 2015 nke usoro m kachasị amasị m bụ "N'ime obodo ọjọọ" nnukwu ihe ịga nke ọma iji kwụsị afọ na n'ezie edemede nke ike ... Ogologo oge na-eche, ekele!
Zaghachi Sergio Angeriz
Ndewo, a bụ m @iloprod na ihe nkiri nke mere m ọchị karịa afọ a bụ El Becario.
Zaghachi Nacho López
Morningtụtụ ọma, daalụ maka raffle maka ikike nke ngwa a.
Usoro kachasị amasị m na 2015 bụ "Lastgbọ Ikpeazụ", ọ bụ ezie na ọ malitere ikuku na 2014, achọpụtaghị m ya ruo afọ a.
Adịkwa ekeresimesi ọma na afọ ọhụụ.
Zaghachi José Enrique
ndewo, onye ọrụ Twitter m, ihe nkiri… martian.
Ndewo m @toolmx, usoro GOTHAM kacha mma !!
My Twitter user is avsurdo, na ọkacha mmasị m usoro a afọ gara aga bụ Game nke n'ocheeze.
Zaghachi Daniel Blanco
Chukwuemeka onyedika (@onyekaonyeka) dijo
Ndewo kedu ka ị mere, Abụ m @_Kriptoniano_, ha nwere ezigbo peeji a raara nye akụkọ Mac, nke m na-agbaso mgbe niile, usoro ọkacha mmasị m na 2015 bụ Flash. Ekele si Tampico, Mexico
Zaghachi Guillermo Guerra O. (@_Kriptoniano_)
Manuel Alejandro Garcia Balderas ihe osise dijo
Morningtụtụ ọma, aha njirimara m bụ AlexGabaa na usoro kachasị amasị m bụ Flash
Zaghachi Manuel Alejandro Garcia Balderas
Ndewo onye ọrụ twitter m bụ @Closernin usoro ọkacha mmasị m n'afọ a bụ oge 2 nke Fargo
Nacho santos dijo
@poculerodiario m onye ọrụ twitter Usoro kachasị mma nke afọ a Mr. Robot
Zaghachi Nacho Santos
Ndewo, aha njirimara Twitter m bụ @toumanian
Usoro m kachasị amasị m n'afọ a bụ House of cards.
Abụ m @ marte1463 na usoro kachasị amasị m nke 2015 bụ Game nke n'ocheeze
Abụ m @aricobleda na usoro ndị masịrị m nke ukwuu Daredevil ..
Zaghachi na aricobleda
@joelsantillan Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime usoro kachasị mma nke 2015 a n'oge nke atọ ya Hannibal ...
Zaghachi joel santillan
Usoro kachasị mma n'afọ a bụ Fargo T2. Ezumike unu nile.
Mgbe oge ụfọdụ hapụsịrị m oyi ụfọdụ, atụgharịrị m na 'The Leftovers'.
Zaghachi Lluis Masdeu
ekele si Argentina !! lee, anyị na-agụkwa ha kwa ụbọchị!
New COO, Apple giveaways, ọhụrụ OS X 10.11.3 beta, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac